Impiana Hotel Senai သည် ဆုလာဘ်များအက်ပ် | သတင်းအမြန်
တည်နေရာ: ပင်မစာမျက်နှာ » Post » သတင်းအမြန် » Impiana Hotel Senai သည် Rewards App ကိုဖွင့်သည်။
မေလးရွား • သတင်းအမြန်
ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်သည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုကျော်လွန်၍ Impiana Hotel Senai သည် အသုံးစရိတ်နှင့်ရယူသည့်ပလပ်ဖောင်းမှတဆင့် ဆုလာဘ်အမျိုးမျိုးဖြင့် အွန်လိုင်းတွင် ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါသည်။
Johor တွင်တည်ရှိသောစီးပွားရေးဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Impiana Hotel Senai သည် Impiana Hotel Senai Rewards App ကိုယနေ့တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏လက်ချောင်းထိပ်တွင် နောက်ဆုံးပေါ် F&B စျေးနှုန်းများနှင့် အခန်းပရိုမိုးရှင်းများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပေးသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများသည် အက်ပ်မှတစ်ဆင့်သုံးစွဲသည့် RM1 တိုင်းအတွက် 1 မှတ်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အသုံးပြုမှုတစ်လျှောက်လုံးတွင် အမျိုးမျိုးသောဆုလာဘ်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည်။
စုဆောင်းထားသော အမှတ်များကို အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာဆိုင်များအားလုံးအပြင် ဟိုတယ်တွင် အခန်းညပုံစံဖြင့် ထုတ်ယူနိုင်သော်လည်း အက်ပ်သည် အသုံးပြုရအဆင်ပြေပြီး F&B လျှော့စျေးများ၊ မွေးနေ့လအတွက် အခမဲ့အစားအစာများနှင့် အထူးအခန်းခများကဲ့သို့ လက်ငင်းဆုလက်ဆောင်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။ app အသုံးပြုသူများအတွက်။ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများအား ပြသထားသည့် ကမ်းလှမ်းချက်များကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာ ပရိုမိုးရှင်းတစ်ခုအား ရွေးချယ်နိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို ငွေပေးချေမှုတံခါးဝသို့ လမ်းညွှန်မထားပါ။
"ဤတစ်ခုတည်းသောအက်ပ်ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဈေးဝယ်သူများနှင့် အပြည့်အဝ omnichannel အတွေ့အကြုံကို ပိုမိုနီးကပ်စေမည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ရုံသာမက သုံးစွဲသူများအတွက် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သော ရွေးချယ်မှုများကို ပေးအပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်များကို တိုးမြှင့်ပေးသည်" ဟု အထွေထွေမန်နေဂျာ Mahadi Mathana မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ Impiana Hotel Senai ၏
၎င်းက Impiana Hotel Senai ကို5ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 10 ရက်နေ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် 2017 နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် Hotel မှ 500 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလအထိ အက်ပ်ထည့်သွင်းမှုတိုင်းအတွက် အမှတ် 2022 ကို ချက်ချင်း ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ပရိုမိုးရှင်းအားလုံးကို အသစ်ထွက်ရှိထားသည့်အက်ပ်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိ အရောင်းရဆုံးသဘောတူညီချက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် BBQ ဘူဖေးညစာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များကို Impiana Hotel Senai Facebook နှင့် Instagram စာမျက်နှာတို့တွင်လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဟိုတယ်သည် အဆင့်2တွင်ရှိသော The Pool တွင် ၎င်း၏ BBQ ဘူဖေးညစာအသစ်ကို စနေနေ့တိုင်းတွင် လူတစ်ဦးလျှင် RM88nett ဖြင့် ပြန်လည်စတင်ရောင်းချနေပြီဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးထွက် F&B ပရိုမိုးရှင်း အထူးအသားပေးများမှာ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် သိုးသားအတောင်ပံများ နှပ်ထားသော ကြက်တောင်ပံများ၊ ကြက်သား Tikka၊ မိနစ်အမဲကင်၊ Medallion ငါး Filets၊ နနွင်းနယ်ထားသော ငါးလွှာများ၊ နနွင်းနယ်ထားသော ပုဇွန်များ၊ ပြောင်းဖူးပေါ်မှ ပြောင်းဖူး၊ ကြက်အူချောင်း၊ အသုပ်စုံနှင့် အစားအသောက်မျိုးစုံ၊ အချိုပွဲများ နှင့် အခြားအရာများ .
၏ နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများ ဆုလာဘ် | Facebook က | ဟော်တယ် | ငါး | အစားအသောက်များ
သင့်နွေရာသီအားလပ်ရက်အတွက် မရှိမဖြစ်ရှိထားရမည့် ခရီးသွားအက်ပ် ၅ ခု အစားအသောက်များ|
Golden Tulip Jaipur တွင် တာဝန်ခံလူသစ်တစ်ယောက်ရှိသည်။ ဟော်တယ်|
ဂျမေကာဝန်ကြီးက ခရီးသွားကစားသမားများအား အလုပ်ခေါ်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတိပေးခဲ့သည်။ ဟော်တယ်|
Facebook က ငါး အစားအသောက်များ ဟော်တယ် ဆုလာဘ်
တုန်လှုပ်စရာ! Elsa Schiaparelli ၏ Surreal ကမ္ဘာ...
Carnival Cruise Line သည် အပျော်စီးသင်္ဘောဆိပ်ကမ်းအသစ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်...
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် အဆင့်မြင့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ၏ ကုသမှုအသစ်
Heathrow ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် BBC 1 စီးရီးအသစ်တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအဆင့်မြင့် metastatic ကိုလေ့လာခြင်းမှစတင်သည် ...
Turks and Caicos- ခရီးသွားဘုတ်အဖွဲ့တွင် သဘာပတိအသစ်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငါးပရိုတိန်းအထီးကျန်စျေးကွက် - အသေးစိတ်စစ်တမ်း...
RV မှာနေနိုင်တဲ့အခါ ဟိုတယ်အခန်းကို ဘာကြောင့်ငှားရတာလဲ။
GMO မဟုတ်သော Soya စျေးကွက်အရွယ်အစား၊ မျှဝေမှု၊ အနာဂတ်လမ်းပြမြေပုံ...
Acute Myeloid Leukemia အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဆေးအသစ်...
ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်သည် အကျုံးဝင်ပါသလား။
Doha မက္ကဆီကိုစီးတီးနှင့် Amman Jordan ယခုရေပန်းစားနေသည်...